alcohol - Synonyms of alcohol | Antonyms of alcohol | Definition of alcohol | Example of alcohol | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for alcohol
Top 30 analogous words or synonyms for alcohol
ဓာတ်ဆီ ဟော (Tertiary Butyl Alcohol)
ဆေးဝါးဗေဒ 282. Isopropanol Antiseptic ကို ဆေးရုံ-ဆေးခန်းသုံး Surgical alcohol ဟု ခေါ်သည်။ ဆေးမထိုးမီ အရေပြားကို သန့်ရှင်း ပေးနိုင်သည်။
ဗွီ-၂ ဒုံးပျံ The combustion burner reachedatemperature of 2500–2700 °C (4500 – 4900 °F). The alcohol-water fuel was pumped along the double wall of the main combustion burner. This regenerative cooling heated the fuel and cooled the chamber. The fuel was then pumped into the main burner chamber through 1,224 nozzles, which assured the correct mixture of alcohol and oxygen at all times. Small holes also permitted some alcohol to escape directly into the combustion chamber, formingacooled boundary layer that further protected the wall of the chamber, especially at the throat where the chamber was narrowest. The boundary layer alcohol ignited in contact with the atmosphere, accounting for the long, diffuse exhaust plume. By contrast, later, post-V-2 engine designs not employing this alcohol boundary layer cooling showatranslucent plume with shock diamonds.
ငါးပါးသီလ ၅။ သုရာမေရယ မဇ္ဇပမာဒဋ္ဌာယီဟောတိ၊ Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi (Abstain from smoking , any drinking alcohol, Intoxicating Drinks and Drugs)
ဆေးဝါးဗေဒ 278. Iodine = rapidly bactericidal, fungicidal, tuberculocidal, virucidal, and sporicidal; Iodine ကို Alcohol နှင့်ရော၍ 2% ကို ခွဲစိတ်ခြင်း မပြုမီ သုံးသည်။ Povidine သည် ရေနှင့်စပ်ထားသော Iodine 10% ဖြစ်ပြီး ပိုကောင်းသည်။
အရက် အမျိုးသမီးတွေမှာ အမျိုးသားများထက်စာရင် ရေဓာတ်ထက် အဆီဓာတ်များသည့်အတွက် အရက်ပြင်းအားတူ၊ ပမာဏတူသောက်လျှင် အမျိုးသားတွေထက် အမူးပိုလွယ်ပါသည်။ အသည်းလည်း ပိုထိခိုက်လွယ်သည်။ အရက်စွဲသူ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကိုယ်ဝန်ရှိလာမည်ဆိုလျှင် ကလေးငယ်မှာ (Fetal Alcohol Synnrome) ရောဂါပါလာနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ကလေးသေးသေးမွေးခြင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ပေါင်မပြည့်ခြင်း၊ ကြီးထွားမှုနှေးခြင်း၊ မျက်နှာနှင့် ခေါင်းတွင် မွေးရာပါချို့ယွင်မှုများဖြစ်ခြင်း၊ ဉာဏ်ရည်မမီခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းနှင့် အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ ဖောက်ပြန်မှုမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင် အရက်သည် သန္ဓေသားအပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
အရက် အရက်သည် ဓာတုဗေဒအခေါ်အဝေါ်အားဖြင့် အီသိုင်းအယ်လ်ကိုဟော (Ethyl Alcohol) သို့မဟုတ် အက်သနော(Ethanol) ဖြစ်ပြီး ယစ်မျိုးဥပဒေအရ အရက်စစ် အီသိုင်းအယ်လ်ကိုဟော အလေးချိန်နှင့် ထုထည်အချိုး (၂ mg%)နှုန်းထက် ပိုမိုပါဝင်သော အရည်ကို အရက်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ အရက်ကို အကြမ်းအားဖြင့် ဘီယာအုပ်စု(Beer)၊ ဝိုင်အုပ်စု(Wine)နှင့် အပြင်းစားအရက်အုပ်စု(Spirit or Strong)ဟူ၍ ခေါ်ဆိုသည်။ ဘီယာအုပ်စုတွင် များသောအာဖြင့် အရက်စစ်စစ် (Pure Alcohol) အလေးချိန်နှင့် ထုထည်အချိုး ၃ mg% မှနေ၍ ၁၀ mg% အထိပါဝင်ပြီး ဝိုင်အုပ်စုတွင် ၉ mg% မှနေ၍ ၁၅ mg% အထိ၊ အပြင်းစားအရက်အုပ်စုများတွင် ၃၀ mg% နှင့်အထက် အသီးသီး ပါရှိကြသည်။ ဝိုင်အုပ်စုမှ ထုတ်လုပ်သည့် အသီးအနှံအပေါ်မူတည်ပြီး စပျစ်ဝိုင်၊ ပန်းသီးဝိုင်၊ နာနတ်ဝိုင် စသဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ အပြင်းစာအရက်များတွင် ဝီစကီ၊ ဘရန်ဒီ၊ ဂျင်၊ ရမ် စသည်တို့ ပါဝင်ကြသည်။ ထန်းရည်၊ ဓနိရည်များပင်လျှင် အယ်လ်ကိုဟော ၂ mg% အထက်ပါဝင်ပါက အရက်ဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘီယာသည် အရက်ပင် ဖြစ်သည်။
ဆေးဝါးဗေဒ g. Adverse effects include stomatitis, nausea, and diarrhea. Ingestion of alcohol while taking metronidazole occasionally results inadisulfiram reaction. With prolonged use at high doses, reversible peripheral neuropathy can develop. Metronidazole can decrease the metabolism of warfarin, necessitating dosage adjustment of warfarin. Metronidazole is carcinogenic in certain animal models and mutagenic for certain bacteria, but to date an increased incidence of malignancy has not been confirmed in humans. Metronidazole (Flagyl) (0.5 g) 20 mg/kg; 1500 mg